Soo -saareyaasha & Shirkadaha Culeyska - Warshadda Miisaanka Shiinaha
Ku habboon miisaamidda miraha qaraha, looska, kernels, yicib, sabiib, nacnac, pistachios, chips chips, strips shrimp, dumplings, meatballs, puffed, hardware and other granular, flake, strip, materials and nongular.
Inta badan ku habboon khudaarta darayga ah ama barafeysan iyo miraha, sida baradhada, khudaarta ballaadhan, yaanyada, cambaha iyo wixii la mid ah Awoodda weyn ee baaldiga miisaamida waxay ku habboon tahay miisaamidda tirada dhammaan noocyada khudaarta iyo walxaha granular ee miisaanka weyn.
Shaqooyin badan oo leh qaabab kaladuwan oo miisaan leh: waxay isku dari kartaa 2-4 nooc oo alaab ah waxayna ku ridi kartaa isla boorsada. Waxaa lagu qalabeyn karaa quudinta laba-geesoodka ah iyo laba mashiinno wax lagu duubo, ama hal shay ayaa lagu isticmaali karaa mashiinka xirxirida xawaaraha sare leh.
Badanaa waxaa loo isticmaalaa in lagu miisaamo walxaha granular ee caadiga ah ama aan joogtada ahayn, oo ku habboon cuntada ama warshadaha aan cuntada ahayn, sida jajabka baradhada, cuntada barafaysan, khudaarta, cuntada badda, ciddiyaha, iwm.
Wareega Suunka Gubashada, Wiishka baaldiga ee rogaya, Wiishashka Cuntada, Gudbinta Silsiladda, Xamuulka Fayadhowrka, Z wiishka baaldi,